ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးနှင့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံသား လူဝင်စားတစ်ဦး၏ ဘ၀ဖြစ်ရပ်မှန် ~ Nge Naing
Tuesday, March 06, 2012 Nge Naing 14 comments
သေခါနီးရောက်နေသည့် သတ္တ၀ါသည် မိမိပြုထားသော ကောင်းမှုကံ၊ မကောင်းမှုကံ တစ်ခုခုကို ဖြစ်စေ၊ ထိုကံကိုပြုစဉ်က ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော အာရုံကိုဖြစ်စေ၊ ဖြစ်ရမည့် နောင်ဘ၀က အခြေအနေကိုဖြစ်စေ ထင်မြင်စွဲလမ်းလျက်ရှိနေ၏။ ထိုအာရုံကို အလိုမရှိသော်လည်း ထိုအခါမျိုးမှာ ပယ်ဖျောက်၍မရ၊ ထို့ကြောင့် သေခါနီး၌ မိန်းမောတွေဝေနေသော သူတို့တွင် တစ်ချို့မှာ တစ်စုံတစ်ခုကို ပြုလုပ်နေသကဲ့သို့ လည်းကောင်း၊ တစ်ချို့မှာ ၀မ်းသာစရာ ပျော်ရွှင်စရာများ တွေ့နေသကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ တစ်ချို့မှာ ကြောက်လန့် စရာ ဘေးရန် များနှင့် တွေ့နေ သကဲ့သို့လည်းကောင်း ထူးထူးခြားခြားဖြစ်နေသည်ကို အနီးအပါးရှိလူများက အထင်ရှားတွေ့ရလေသည်။
March 9, 2012 at 8:31 PM Reply
ဖတ်တော့ ဖတ်ဖူးတယ်.. ပြန်ဖတ်သွားပါတယ်. :)
သေကာနီး အစွဲအလမ်းများဟာ သတိထားစရာနော်..။
အတိတ်ဘဝကို မှတ်မိသော ဗြိတိသျှ လူဝင်စား ကလေးငယ် (၁) says:
March 21, 2012 at 1:24 AM Reply
( "အတိတ်ဘဝကို မှတ်မိသော ဗြိတိသျှ ကလေးငယ်" ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပြီး လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်း မကောလီ ဓာတ်ပုံ ကို ကြည့်နိုင်ပါသည်။ )
စကော့တလန်နိုင်ငံ၊ ဂလပ်စဂိုမြို့တွင် နေထိုင်သော လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်း မကောလီ သည် ယခင်ဘဝက စကော့တလန်နိုင်ငံ၊ ဘားရာကျွန်းပေါ်ရှိ ရောဘတ်ဆင် မိသားစု၏ "အဖြူရောင် အိမ်" တွင် မစ္စတာ ရှိန်း ရောဘတ်ဆင် ၏ သား ကင်းမရွန်း ရောဘတ်ဆင် အဖြစ် နေထိုင်ခဲ့သည်။
(1) ကင်းမရွန်း မကောလီ နှင့် မိခင် နော်မာ (ဓာတ်ပုံ) နှင့်
(2) ကင်းမရွန်း မကောလီ ယခင်ဘဝက နေထိုင်ခဲ့သော ရောဘတ်ဆင် မိသားစု၏ "အဖြူရောင် အိမ်" (ဓာတ်ပုံ)
လူများမှာ ရှေးဘဝများနှင့် နောက်ဘဝများ တကယ် ရှိပါသလား။ ယူကေနိုင်ငံထုတ် သတင်းစာ တစောင် ဖြစ်သော သည်ဆန်း က အတိတ်ဘဝများကို မှတ်မိသော လူဝင်စား ကလေးတဦး၏ အကြောင်းကို ဖော်ပြထားသည်။
ဤ ခြောက်နှစ်သား လူဝင်စား ကလေးမှာ ယောက်ျားလေး ဖြစ်ပြီး ကင်းမရွန်း မကောလီ ဟု အမည်ရသည်။ လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်း မကောလီ သည် သူနှင့် ရွယ်တူ အခြား ယောက်ျားလေးများနှင့် သိပ် မကွာခြားလှပါ။ ကင်းမရွန်း ကို အခြား ကလေးများနှင့် မတူ တမူ ထူးခြားစေသည့် အချက်မှာ ကင်းမရွန်းသည် သူ၏ ယခင်ဘဝက "မိခင်ဟောင်း"၊ သူ၏ ယခင်ဘဝက "မိသားစုဟောင်း" နှင့် "အဖြူရောင် အိမ်" အကြောင်းကို ပြောဆိုရသည်ကို နှစ်သက်တတ်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ခြောက်နှစ်သား စကော့လူမျိုး ကလေးငယ် ကင်းမရွန်း မကောလီ က မည်သူက မည်သို့မည်ပုံ ဖြစ်သည်၊ လုပ်သည်ဟု အသေးစိတ် အစီအစဉ်တကျ စီကာပတ်ကုံး ပြောပြနေတတ်သော သူများထဲမှ တဦးတလေမှ ကင်းမရွန်း၏ လက်ရှိဘဝနှင့် ဆက်စပ်နေသူများ မဟုတ်ပါ။ ကင်းမရွန်း ပြောပြနေတတ်သော နေရာမှာလည်း ကင်းမရွန်း၏ ယခုဘဝတွင် လုံးဝ မရောက်ဖူးသော နေရာတခု ဖြစ်သည်။ ထိုနေရာသည် ကင်းမရွန်း ယခု နေထိုင်သည့် စကော့တလန်နိုင်ငံ၊ ဂလပ်စဂိုမြို့နှင့် မိုင် ၂၂၀ ကွာဝေးသည့် စကော့တလန်နိုင်ငံ၊ အနောက်ဘက်ကမ်းခြေ အလွန်ရှိ လူအရောက်အပေါက် နည်းသော ဘားရာကျွန်းပေါ်တွင် ရှိသည်။ ကင်းမရွန်း ပြောဆိုနေသည့် သူ၏ ယခင်ဘဝက "မိခင်ဟောင်း"၊ သူ၏ ယခင်ဘဝက "မိသားစုဟောင်း" နှင့် "အဖြူရောင် အိမ်" အကြောင်းများက ကင်းမရွန်း၏ မိခင် နော်မာ ကို စိုးရိမ်ပူပန်မှု ဖြစ်စေသည်။
အတိတ်ဘဝကို မှတ်မိသော ဗြိတိသျှ လူဝင်စား ကလေးငယ် (၂) says:
March 21, 2012 at 1:27 AM Reply
စကော့လူမျိုး လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်း မကောလီ ၏ ယခင် ဘဝကို မှတ်မိမှု
လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်း မကောလီ က သူ၏ ယခင်ဘဝက စကော့တလန်နိုင်ငံရှိ ဘားရာ အမည်ရှိ ကျွန်းပေါ်တွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော သူ၏ ကလေးဘဝ ဇာတ်လမ်းများကို ပြောပြသည်ဟု အသက် ၄၂ နှစ် အရွယ်ရှိ ကင်းမရွန်း၏ မိခင် နော်မာ က ဆိုသည်။
ကင်းမရွန်းက သူ့ ယခင်ဘဝက မိဘများ အကြောင်း၊ သူ့ယခင်ဘဝက ဖခင် မည်ကဲ့သို့ သေဆုံးပုံ အကြောင်း၊ သူ့ ယခင်ဘဝက မောင်နှမများ အကြောင်းကို ပြောဆိုတတ်သည်။ ကင်းမရွန်းက သူ့ "မိခင်ဟောင်း" ဆိုသည်မှာ သူ့ "ယခင်ဘဝက မိခင်" ဖြစ်သည်ဟုလည်း ပြောသည်။ ကင်းမရွန်းက သူ့တွင် ယခင်ဘဝ ရှိခဲ့သည်ကို ယုံကြည်သည်။ သူ့ယခင်ဘဝက မိသားစုသည် သူ့ကို လွမ်းဆွတ် သတိရနေသည်ဟုလည်း ကင်းမရွန်းက ယုံကြည်သည်။ စကော့တလန်နိုင်ငံရှိ ဘားရာကျွန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကင်းမရွန်းက ပြောပြသည့် အကြောင်းအရာ အားလုံးနှင့် ကင်းမရွန်းက ဘားရာကျွန်း ပေါ်က သူ့မိခင်နှင့် သူ့ မောင်နှမများကို သူ မည်သို့မည်ပုံ သတိရ အောက်မေ့သည် ဆိုသည့် အကြောင်းကို ကင်းမရွန်း၏ နေ့ကလေးထိန်းကျောင်းဆရာမက ကင်းမရွန်း၏ မိခင် နော်မာကို ပြောပြသည်။
လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်း၏ မိခင် နော်မာက ယခုလို ပြောပြသည်။
"ဘားရာကျွန်းက သူ့အရင်ဘဝက မိသားစုရဲ့ အိမ်မှာ အိမ်သာ ၃ ခု ရှိပြီး ဂလပ်စဂိုမြို့က ကျမတို့ အိမ်မှာ အိမ်သာတခုပဲ ရှိတာကို ကင်းမရွန်းက မကျေမနပ် တဖြစ်တောက်တောက် ပြောပြောနေတတ်တယ်။ ကင်းမရွန်းက သူ့အရင်ဘဝက အမေအတွက် ငိုငိုနေတတ်တယ်။ သူ့အရင်ဘဝက အမေက သူ့ကို လွမ်းနေမှာ လို့လဲ ပြောတတ်တယ်။ ကင်းမရွန်းက အခုဘဝမှာ သူ အစစအရာရာ အဆင်ပြေပြေ ရှိပါတယ် ဆိုတာကို ဘားရာကျွန်းက သူ့ အရင်ဘဝက မိသားစု သိစေချင်တယ်လို့လဲ ပြောတတ်တယ်။ အဲဒီလို ပြောပြီး ကင်းမရွန်းက အရမ်း ဝမ်းနည်းပက်လက် ဖြစ်ဖြစ်နေတတ်တယ်။ ဘားရာကျွန်း အကြောင်း၊ သူနဲ့ သူ့အရင် မိသားစုတို့ ဘယ်နေရာတွေကို သွားတဲ့အကြောင်း၊ ဘာတွေ လုပ်တဲ့အကြောင်း၊ သူ့အိပ်ခန်း ပြူတင်းပေါက်ကနေပြီး ကမ်းခြေပေါ်ကို ဆင်းလာတဲ့ လေယာဉ်တွေကို သူ ကြည့်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကို ကင်းမရွန်းက ပြောမဆုံးပေါင်၊ တောသုံးထောင် ဆိုသလို မရပ်မနား ပြောပြောနေတော့တာပါပဲ။"
ကင်းမရွန်း၏ ယခင်ဘဝက ဖခင်၏ အမည်မှာ မစ္စတာ ရှိန်း ရောဘတ်ဆင် ဖြစ်သည်ဟုပင် ကင်းမရွန်းက ပြောပြသည်။ ကင်းမရွန်း၏ ယခင်ဘဝက ဖခင် မစ္စတာ ရှိန်း ရောဘတ်ဆင် သည် "နှစ်ဘက်လုံးကို မကြည့်" သောကြောင့် အသက်ဆုံးခဲ့ရသည်ဟု ကင်းမရွန်းက ဆိုသည်။ ("နှစ်ဘက်လုံးကို မကြည့်" သောကြောင့် အသက်ဆုံးခဲ့ရသည် ဆိုသည်မှာ သူ၏ ယခင်ဘဝက ဖခင်သည် ကားလမ်း ဖြတ်ကူးရာတွင် လက်ဝဲဘက်၊ လကျာ်ဘက် "နှစ်ဘက်လုံးကို မကြည့်" သောကြောင့် ကားတိုက်ခံခဲ့ရပြီး သေဆုံးခဲ့သည်ဟု ဆိုလိုသည်။)
ဘားရာကျွန်းကို တမိသားစုလုံး တခါမှ မရောက်ဖူးပါ ဟု ကင်းမရွန်း၏ မိခင် နော်မာက ဆိုသည်။ အစပိုင်းတွင် ကင်းမရွန်း၏ မိခင် နော်မာ တို့ အနေဖြင့် လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်း ပြောပြောနေတတ်သော သူ၏ ယခင်ဘဝ အကြောင်းများကို ကင်းမရွန်းက စိတ်ကူးယဉ်ပြီး ပြောနေသည့် ဇာတ်လမ်းများဟုသာ သဘောထားခဲ့ကြသည်။ ကင်းမရွန်းသည် ဘာရာကျွန်းပေါ်က သူ၏ ယခင်ဘဝက မိသားစု (မစ္စတာ ရှိန်း ရောဘတ်ဆင် မိသားစု) ၏ "အဖြူရောင် အိမ်" မှ ထွက်ခွာခဲ့ရသည်ကို ဝမ်းနည်းပက်လက် ဖြစ်မြဲ ဖြစ်နေဆဲပင်။ ထိုကဲ့သို့ ထွက်ခွာခဲ့ရခြင်းအတွက် ခံစားရသော ကင်းမရွန်း၏ စိတ်ထိခိုက်ခံစားမှု စိတ်ဝေဒနာသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာခဲ့သည်။
ယခင်ဘဝများ ရှိခဲ့ဖူးသည်ဟု ယုံကြည်သည့် လူဝင်စားများကို ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီ တခုက ရှာဖွေနေသည့်အကြောင်းကို ကင်းမရွန်း၏ နေ့ကလေးထိန်းကျောင်းဆရာမက ကင်းမရွန်း၏ မိခင် နော်မာကို တနေ့တွင် ပြောလာသည်။ လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်း အကြောင်းကို ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီက လူများကို ပြောပြရန် ကင်းမရွန်း၏ ဆရာမက ကင်းမရွန်း၏ မိခင် နော်မာကို အကြံပေးသည်။ နော်မာသည် လင်ယောက်ျားမရှိတော့ဘဲ တဦးတည်း ရပ်တည်နေရသော အမျိုးသမီး ဖြစ်သည်။ နော်မာတွင် မာတင် အမည်ရှိ သားတဦး ရှိသေးသည်။ မာတင်သည် ကင်းမရွန်းထက် တနှစ်ကြီးပြီး ကင်းမရွန်းက သူ၏ ယခင်ဘဝ အကြောင်း ပြောပြချက်များကြောင့် မာတင်လည်း စိတ်ထိခိုက် ခံစားရသည်။ ထိုအတောအတွင်းမှာ ကင်းမရွန်းကလည်း ဘားရာကျွန်းကို လိုက်ပို့ပေးရန် မိခင် နော်မာကို ပူဆာမြဲ ပူဆာနေသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ဘားရာကျွန်းတွင် ထူးထူးခြားခြား တွေ့နိုင်မည့် အရာများကို တွေ့နိုင်ရန် လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်းကို စကော့တလန်နိုင်ငံ၊ အနောက်ဘက်ကမ်းခြေ အလွန်ရှိ ဘားရာကျွန်းသို့ လိုက်ပို့ပေးရန် နော်မာ ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့သည်။
March 21, 2012 at 1:33 AM Reply
အတိတ်ဘဝကို မှတ်မိသော ဗြိတိသျှ လူဝင်စား ကလေးငယ် (၃) says:
March 21, 2012 at 1:36 AM Reply
ဘားရာကျွန်းကို တမိသားစုလုံး တခါမှ မရောက်ဖူးပါ ဟု ကင်းမရွန်း၏ မိခင် နော်မာက ဆိုသည်။ အစပိုင်းတွင် ကင်းမရွန်း၏ မိခင် နော်မာ တို့ အနေဖြင့် လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်း ပြောပြောနေတတ်သော သူ၏ ယခင်ဘဝ အကြောင်းများကို ကင်းမရွန်းက စိတ်ကူးယဉ်ပြီး ပြောနေသည့် ဇာတ်လမ်းများဟုသာ သဘောထားခဲ့ကြသည်။
ကင်းမရွန်းသည် ဘာရာကျွန်းပေါ်က သူ၏ ယခင်ဘဝက မိသားစု (မစ္စတာ ရှိန်း ရောဘတ်ဆင် မိသားစု) ၏ "အဖြူရောင် အိမ်" မှ ထွက်ခွာခဲ့ရသည်ကို ဝမ်းနည်းပက်လက် ဖြစ်မြဲ ဖြစ်နေဆဲပင်။ ထိုကဲ့သို့ ထွက်ခွာခဲ့ရခြင်းအတွက် ခံစားရသော ကင်းမရွန်း၏ စိတ်ထိခိုက်ခံစားမှု စိတ်ဝေဒနာသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာခဲ့သည်။
ယခင်ဘဝများ ရှိခဲ့ဖူးသည်ဟု ယုံကြည်သည့် လူဝင်စားများကို ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီ တခုက ရှာဖွေနေသည့်အကြောင်းကို ကင်းမရွန်း၏ နေ့ကလေးထိန်းကျောင်းဆရာမက ကင်းမရွန်း၏ မိခင် နော်မာကို တနေ့တွင် ပြောလာသည်။ လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်း အကြောင်းကို ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီက လူများကို ပြောပြရန် ကင်းမရွန်း၏ ဆရာမက ကင်းမရွန်း၏ မိခင် နော်မာကို အကြံပေးသည်။
နော်မာသည် လင်ယောက်ျားမရှိတော့ဘဲ တဦးတည်း ရပ်တည်နေရသော အမျိုးသမီး ဖြစ်သည်။ နော်မာတွင် မာတင် အမည်ရှိ သားတဦး ရှိသေးသည်။ မာတင်သည် ကင်းမရွန်းထက် တနှစ်ကြီးပြီး ကင်းမရွန်းက သူ၏ ယခင်ဘဝ အကြောင်း ပြောပြချက်များကြောင့် မာတင်လည်း စိတ်ထိခိုက် ခံစားရသည်။
ထိုအတောအတွင်းမှာ ကင်းမရွန်းကလည်း ဘားရာကျွန်းကို လိုက်ပို့ပေးရန် မိခင် နော်မာကို ပူဆာမြဲ ပူဆာနေသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ဘားရာကျွန်းတွင် ထူးထူးခြားခြား တွေ့နိုင်မည့် အရာများကို တွေ့နိုင်ရန် လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်းကို စကော့တလန်နိုင်ငံ၊ အနောက်ဘက်ကမ်းခြေ အလွန်ရှိ ဘားရာကျွန်းသို့ လိုက်ပို့ပေးရန် နော်မာ ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့သည်။
အတိတ်ဘဝကို မှတ်မိသော ဗြိတိသျှ လူဝင်စား ကလေးငယ် (၄) says:
March 21, 2012 at 2:01 AM Reply
စကော့လူမျိုး လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်း စကော့တလန်နိုင်ငံ၊ အနောက်ဘက်ကမ်းခြေ အလွန်ရှိ ဘားရာကျွန်းကို လည်ပတ်ခြင်း
စကော့လူမျိုး လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်း မကောလီ ၏ မိခင် နော်မာက ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီကို အဆက်အသွယ် လုပ်လိုက်သည်။ စကော့တလန်နိုင်ငံ၊ ဂလပ်စဂိုမြို့တွင် နေထိုင်သော လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်း မကောလီ၊ မိခင် နော်မာ နှင့် အစ်ကို မာတင်တို့၏ စကော့တလန်နိုင်ငံ၊ ဘားရာကျွန်း ခရီးစဉ်မှာ ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီအဖွဲ့သားများလည်း အတူ လိုက်ပါလာကြသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ ကလေးနှင့် မိသားစု စိတ်ရောဂါအထူးကု ဆေးရုံအုပ် ဖြစ်သော စိတ်ရောဂါကုသမှု တွဲဘက်ပါမောက္ခ နှင့် လူဝင်စား သုတေသီ ဒေါက်တာ ဂျင်မ် တပ်ကာ လည်း အတူ လိုက်လာသည်။ တွဲဘက်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ဂျင်မ် တပ်ကာ သည် လူဝင်စား အကြောင်းကို အထူးပြုပြီး လေ့လာနေသည့် ပညာရှင် ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် လူဝင်စား ကလေးငယ်များ အကြောင်းကို လေ့လာနေသူ ဖြစ်သည်။
လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်း ယခင်ဘဝက နေထိုင်ခဲ့သည် ဆိုသည့် စကော့တလန်နိုင်ငံ၊ အနောက်ဘက်ကမ်းခြေ အလွန်ရှိ ဘားရာကျွန်းကို အလည်သွားမည့် အကြောင်းကို ကင်းမရွန်းကို ပြောပြလိုက်သောအခါ ကင်းမရွန်းသည် အလွန်အမင်း ပျော်ရွှင်သွားပြီး တအိမ်လုံးရှိ နေရာအနှံ့မှာ ခုန်ပေါက်နေတော့သည်။
ကင်းမရွန်းတို့ မိသားစုသည် ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီအဖွဲ့သားများ၊ စိတ်ရောဂါကုသမှု တွဲဘက်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ဂျင်မ် တပ်ကာ တို့နှင့်အတူ ၂၀ဝ၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စကော့တလန်နိုင်ငံ၊ ဘားရာကျွန်းသို့ ခရီးထွက်ခဲ့ကြသည်။
ကင်းမရွန်းက အလွန် ပျော်ရွှင်နေသဖြင့် သူ့မျက်နှာ ဝင်းလက် တောက်ပနေသလား ဟု ကင်းမရွန်းက မိခင် နော်မာကို မေးလိုက်သေးသည်။
အတိတ်ဘဝကို မှတ်မိသော ဗြိတိသျှ လူဝင်စား ကလေးငယ် (၅) says:
March 21, 2012 at 2:07 AM Reply
၂၀ဝ၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ၏ နေ့တနေ့တွင် စကော့လူမျိုး လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်း မကောလီ၊ မိခင် နော်မာ အစ်ကို မာတင် တို့သည် ရောဘတ်ဆင် မိသားစု၏ "အဖြူရောင် အိမ်" ရှာပုံတော် အဖွဲ့သားများ ဖြစ်သော ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီအဖွဲ့သားများ၊ စိတ်ရောဂါကုသမှု တွဲဘက်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ဂျင်မ် တပ်ကာ တို့နှင့်အတူ စကော့တလန်နိုင်ငံ၊ အနောက်ဘက်ကမ်းခြေ အလွန်ရှိ ဘားရာကျွန်းကို ရောက်လာတော့သည်။
လေယာဉ်က ကမ်းခြေမှာ ဆင်းလိုက်သည့်အခါ အရာရာတိုင်းသည် ကင်းမရွန်း ပြောပြခဲ့သည့်အတိုင်း အတိအကျ ဖြစ်နေသည်။ လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်း က ယခုဘဝတွင် ဘားရာကျွန်းကို တခါမှ မရောက်ဖူးသေးခင်က ပြောဆို သရုပ်ဖော် ပြောပြထားခဲ့သည့်အချက်အလက်များနှင့် ယခု ဘားရာကျွန်းပေါ်တွင် မြင်နေရသည်များက အံဩဘွယ် ကောင်းရလောက်အောင် တသွေမတိမ်း ကိုက်ညီနေသည်။ ကင်းမရွန်းက သူ့အစ်ကို မာတင်နှင့် သူ့မိခင် နော်မာဖက်သို့ လှည့်ကြည့်ပြီး "ကျနော့်ကို အခု ယုံကြပြီလား" ဟု မေးလိုက်သည်။
လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်းက လေယာဉ်ပေါ်က ဆင်းလိုက်စဉ်မှာ လက်နှစ်ဘက်လုံးကို ဝှေ့ရမ်းပြီး "ကျနော် ပြန်လာပြီ" ဟု ကျယ်လောင်စွာ အော်လိုက်သည်။ ကင်းမရွန်းက ဘားရာကျွန်းတွင် နေထိုင်သည့် သူ့ယခင်ဘဝက မိခင် အကြောင်းကို ပြောနေသည်။ ဘားရာကျွန်းက သူ့မိခင်သည် အညိုရောင် ဆံပင်ရှည်များ ရှိပြီး ဆံပင် မညှပ်ပစ်လိုက်မီက ခါးအထိရောက်အောင် ရှည်လျားသည်ဟု ကင်းမရွန်းက သူ့မိခင် နော်မာကို ပြောပြသေးသည်။
လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်း မှာ အထူး စိတ်ဓာတ် တက်ကြွနေသည်။ ယခုဘဝ မိခင် နော်မာ နှင့် ဘားရာကျွန်းမှ ယခင်ဘဝ မိခင် မစ္စစ် ရောဘတ်ဆင် (မစ္စတာ ရှိန်း ရောဘတ်ဆင် ၏ ဇနီး) တို့ တဦးကိုတဦး နှစ်သက်ကြလိမ့်မည်ဟု ကင်းမရွန်းက အားတက်သရော ပြောနေသည်။ သူ့ မိခင် နှစ်ဦး တဦးနှင့်တဦး တွေ့ဆုံစေရန် ကင်းမရွန်းက စိတ်အားထက်သန်နေသည်။
အတိတ်ဘဝကို မှတ်မိသော ဗြိတိသျှ လူဝင်စား ကလေးငယ် (၆) says:
March 21, 2012 at 2:13 AM Reply
လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်း မကောလီ က သူ့ ယခင်ဘဝက စကော့တလန်နိုင်ငံ၊ အနောက်ဘက်ကမ်းခြေ အလွန်ရှိ ဘားရာကျွန်းပေါ်ရှိ ရောဘတ်ဆင် မိသားစု ၏ "အဖြူရောင် အိမ်" တွင် သူ ဖတ်ခဲ့သော စာအုပ်ကြီး အကြောင်းကိုလည်း ပြောပြတတ်သည်။ ထာဝရဘုရားသခင် အကြောင်း၊ ယေရှုခရစ်တော် အကြောင်းကိုလည်း ကင်းမရွန်းက ပြောတတ်သေးသည်။ ကင်းမရွန်း၏ ယခုဘဝ မိခင် နော်မာ၏ မိသားစုဝင်များသည် ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းသူများ မဟုတ်ကြပါ ဟု နော်မာက ဆိုသည်။ ကင်းမရွန်း၏ ယခင်ဘဝက မိသားစု (ဘာရာကျွန်းက မိသားစု) မှာ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းသူများ ဖြစ်ဟန်ရှိသည်ဟု နော်မာက ယူဆသည်။
နော်မာ၊ ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီ အဖွဲ့သားများ၊ စိတ်ရောဂါကုသမှု တွဲဘက်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ဂျင်မ် တပ်ကာ တို့သည် ဘားရာကျွန်းသို့ ရောက်လာပြီးနောက် ဟိုတယ်တခုတွင် တည်းခိုကာ ကင်းမရွန်း၏ ယခင်ဘဝနှင့် ပတ်သက်သည့် သဲလွန်စများကို စတင် ရှာဖွေကြသည်။
ဒေသတခုသို့ အလည်အပတ် လာရောက်သူ တိုးရစ်များ အနေဖြင့် ထိုဒေသ၏ သတင်း အချက်အလက်များကို မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်သည့် ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် ပြတိုက်ရုံးကို နော်မာနှင့် ရှာပုံတော်အဖွဲ့သားများက ဆက်သွယ်ကာ "ပင်လယ်အော် ရှိ `အဖြူရောင် အိမ်´ တွင် နေထိုင်သည့် ရောဘတ်ဆင် မိသားစု ကို သိပါသလား" ဟု စုံစမ်းခဲ့ကြသည်။ ပြတိုက်ရုံးဝန်ထမ်းများ၏ မသိပါ ဆိုသည့် အဖြေကို ကြားရသည့်အခါ လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်းက အလွန် စိတ်ပျက်သွားခဲ့သည်။
ထိုနောက် ရှာပုံတော်အဖွဲ့သားများ ဘားရာကျွန်းပေါ်တွင် ကားဖြင့် လှည့်ပတ် သွားလာကာ ရှာဖွေကြသည်။ သို့သော် လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်း ယခင်ဘဝက နေထိုင်ခဲ့သည် ဆိုသည့် "အဖြူရောင် အိမ်" ကို မတွေ့ကြပါ။
အတိတ်ဘဝကို မှတ်မိသော ဗြိတိသျှ လူဝင်စား ကလေးငယ် (၇) says:
March 21, 2012 at 2:34 AM Reply
"ကင်းမရွန်းသည် ပင်လယ်ကမ်းခြေတွင် လေယာဉ်များ ဆင်းသက်သည်ကို သူ၏ အိပ်ခန်း ပြူတင်းပေါက်မှ မြင်နိုင်သည်" ဆိုသည့်အချက်ကို ပြန်လည် ထည့်သွင်း စဉ်းစားကြည့်မိသည့်အခါကျမှ နော်မာနှင့် ရှာပုံတော်အဖွဲ့သားများသည် မှားယွင်းသည့် လားရာဘက်သို့ ကားမောင်းလာခဲ့မိပြီး မှားယွင်းသည့် နေရာများတွင် "အဖြူရောင် အိမ်" ကို ရှာဖွေနေမိပြီ ဖြစ်ကြောင်း သဘောပေါက်လာတော့သည်။
ထိုအတောအတွင်းမှာပင် "ပင်လယ်အော် ရှိ `အဖြူရောင် အိမ်´ တွင် နေထိုင်သည့် ရောဘတ်ဆင် မိသားစု အမှန်တကယ် ရှိသည်" ဆိုသည့် အတည်ပြုထားပြီး ဖြစ်သော သတင်းကို ဟိုတယ်က ဖုန်းဆက် အကြောင်းကြားချက်ကို ရှာပုံတော်အဖွဲ့သားများ ရရှိခဲ့သည်။
ထိုအကြောင်းကို ရှာပုံတော်အဖွဲ့သားများက ကင်းမရွန်းကို မပြောပြဘဲ အိမ်ဖြူ ရှိသည် ဆိုသည့်ဘက်သို့ မောင်းသွားကာ အိမ်ဖြူ ကို ရောက်သည့်အခါ ကင်းမရွန်း မည်သို့မည်ပုံ ဖြစ်ပျက်မည် ဆိုသည်ကို စောင့်ကြည့်ရန် စီစဉ်ခဲ့ကြသည် ဟု ကင်းမရွန်း၏ မိခင် နော်မာက ပြန်ပြောင်း ပြောပြသည်။
ကင်းမရွန်း၊ နော်မာ နှင့် ရှာပုံတော်အဖွဲ့သားများ အိမ်ဖြူကို ရောက်လာကြသည့်အခါ လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်းက အိမ်ဖြူကို ချက်ခြင်းပင် မှတ်မိပြီး အလွန့်အလွန် ပျော်ရွှင်သွားသည်။ အိမ်ဖြူ၏ တံခါးဝသို့ သူတို့ လျှောက်သွားကြသည့်အခါ ကင်းမရွန်းက စကား လုံးဝ မပြောတော့ဘဲ အထူး ငြိမ်သက်နေသည်။
လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်း ယခင်ဘဝက ဘားရာကျွန်းတွင် နေခဲ့စဉ် ကင်းမရွန်း၏ ယခင်ဘဝက မိခင်က ကင်းမရွန်း အိမ်ပြန်အလာကို အိမ်တွင်းတွင် စောင့်နေတတ်သည်ဟု ကင်းမရွန်း က မိခင် နော်မာကို ပြောပြလေ့ရှိသည့်အတိုင်း ယခုလည်း ကင်းမရွန်း၏ ယခင်ဘဝက မိခင်က ကင်းမရွန်းကို အိမ်တွင်းတွင် စောင့်နေမည်ဟု ကင်းမရွန်းက တွေးနေမည် ထင်သည်ဟု နော်မာက မှန်းဆသည်။ သို့သော် ကင်းမရွန်း ယခင်ဘဝက နေထိုင်ခဲ့သော "အဖြူရောင် အိမ်" တွင်းတွင် မည်သူမှ မရှိသည်ကို တွေ့ရသည့်အခါ ကင်းမရွန်းက ဝမ်းနည်းပက်လက် ဖြစ်သွားတော့သည်။
အိမ်ဖြူ၏ ယခင်ပိုင်ရှင်သည် တမလွန်ဘဝသို့ ရောက်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ အိမ်ဖြူ၏ သော့ကို ကိုင်ထားသူက နော်မာတို့ကို အိမ်ဖြူကို ဖွင့်ပေးပြီး ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုခွင့် ပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်းသည် ယခုဘဝတွင် သူ တခါမှ မရောက်ဖူးသေးသော စကော့တလန်နိုင်ငံ၊ အနောက်ဘက်ကမ်းခြေ အလွန်ရှိ ဘားရာကျွန်းပေါ်ရှိ ရောဘတ်ဆင် မိသားစု၏ "အဖြူရောင် အိမ်" ကို ရင်းရင်းနှီးနှီး သိနေသည်။ အိမ်ဖြူ၏ နေရာတိုင်းကို ကင်းမရွန်းက အကျွမ်းတဝင် သိနေသည်။ အိမ်ဖြူကို မရောက်လာမီကတဲက ကင်းမရွန်း ပြောပြောနေတတ်သည့်အတိုင်း အိမ်ဖြူတွင် အိမ်သာနှင့် တွဲလျက် ရေချိုးခန်း ၃ ခန်း ရှိပြီး ကင်းမရွန်း၏ အိပ်ခန်း ပြူတင်းပေါက်မှ ကြည့်လျှင် ပင်လယ်ကို မြင်နေရသည်။
အတိတ်ဘဝကို မှတ်မိသော ဗြိတိသျှ လူဝင်စား ကလေးငယ် (၈) says:
March 21, 2012 at 3:01 AM Reply
စကော့လူမျိုး လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်း မကောလီ စကော့တလန်နိုင်ငံ၊ ဘားရာကျွန်းရှိ ယခင်ဘဝက "အဖြူရောင် အိမ်" ကို သွားလည်ရာမှ စကော့တလန်နိုင်ငံ၊ ဂလပ်စဂိုမြို့ရှိ ယခုဘဝ နေအိမ်သို့ ပြန်လာပြီးနောက် အဖြစ်အပျက်များ
စကော့လူမျိုး လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်း မကောလီ အကြောင်းကို စနစ်တကျ သုတေသနလုပ်ကာ လေ့လာသူများသည် စကော့တလန်နိုင်ငံ၊ အနောက်ဘက်ကမ်းခြေ အလွန်ရှိ ဘားရာကျွန်းပေါ်ရှိ "အဖြူရောင် အိမ်" ကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည့် ရောဘတ်ဆင် မိသားစုထဲမှ မိသားစုဝင် တဦးကို ခြေရာကောက်မိကြပြီး ထို ရောဘတ်ဆင် ဆိုသူ နေထိုင်သည့် စကော့တလန်နိုင်ငံ၊ စတာလင် မြို့ကလေးရှိ နေအိမ်သို့ သွားရောက် တွေ့ဆုံခဲ့ကြသေးသည်ဟု နော်မာက ပြောပြသည်။ သို့သော် ထို ရောဘတ်ဆင် ထံမှ လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်း၏ ယခင်ဘဝက ဖခင် မစ္စတာ ရှိန်း ရောဘတ်ဆင် ဆိုသူနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်း အချက်အလက်များကိုတော့ မရခဲ့ကြပါ။
လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်းသည် ဘားရာကျွန်း ခရီးစဉ် မတိုင်မီက သူ၏ ယခင်ဘဝက မိသားစု၏ ဓာတ်ပုံများကို ကြည့်ရှုရန် စိတ်အားထက်သန်ခဲ့သည်။ သူ၏ ယခင်ဘဝက ဖခင်၏ ဓာတ်ပုံနှင့် သူကိုယ်တိုင်၏ ယခင်ဘဝက ဓာတ်ပုံများကို မြင်ရမည် ဟု ကင်းမရွန်းက ထင်နေခဲ့သည့် အထင်ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကင်းမရွန်းသည် ဘားရာကျွန်းသို့ သွားမလည်မီကတဲက ကားနက်ကြီး အကြောင်းနှင့် အဖြူနှင့် အမဲရောင် ပါသော ခွေးတကောင် အကြောင်းကို အစဉ်အမြဲ ပြောပြောနေတတ်သည်။ ထိုကားနက်ကြီးရော၊ ဖြူနက် နှစ်ရောင်စပ်ခွေးပါ ဓာတ်ပုံများထဲတွင် တွေ့ရသည်။
နော်မာတို့ ရှာပုံတော်အဖွဲ့သားများ စကော့တလန်နိုင်ငံ၊ ဘားရာကျွန်းမှ စကော့တလန်နိုင်ငံ၊ ဂလပ်စဂိုမြို့ရှိ အိမ်သို့ ပြန်လာပြီးနောက် လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်းသည် စကား သိပ်မပြောတော့ပါ။ ဘားရာကျွန်း ခရီးစဉ် မတိုင်မီကထက် များစွာ ပိုပြီး တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် နေနေတော့သည်။
စကော့တလန်နိုင်ငံ၊ အနောက်ဘက်ကမ်းခြေ အလွန်ရှိ ဘားရာကျွန်းသို့ သွားရောက်ခဲ့သည်မှာ အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ချက် ဖြစ်သည်ဟု နော်မာက ဆိုသည်။ ဘားရာကျွန်း ခရီးစဉ်က လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်းကို ယခင်ကထက် များစွာ ပိုမို ပျော်ရွှင်စေခဲ့ပြီး ဘားရာကျွန်းသို့ သွားရန် ထပ်ပြီး မပူဆာတော့ပါ။ ကင်းမရွန်း၏ မိခင် နော်မာ နှင့် အစ်ကို မာတင် က ကင်းမရွန်းက လုပ်ကြံဇာတ်လမ်းများကို စိတ်ကူးယဉ်ပြီး ပြောနေသည်ဟု မထင်တော့ကြောင်းကို ယခုအခါ ကင်းမရွန်းက သိသွားပြီ ဖြစ်သည်။ ကင်းမရွန်း၏ မိခင် နှင့် အစ်ကို က ရှာဖွေနေသည့် အဖြေများကိုလည်း ရှာတွေ့သွားကြပြီ ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ကင်းမရွန်းက သိနေပြီ ဖြစ်သည်။
အတိတ်ဘဝကို မှတ်မိသော ဗြိတိသျှ လူဝင်စား ကလေးငယ် (၉) says:
March 21, 2012 at 3:18 AM Reply
လူဝင်စား ကလေးငယ် တဦးသည် အသက်အရွယ် ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ ယခင်ဘဝနှင့် ပတ်သက်သည့် မှတ်မိမှုသည် တဖြည်းဖြည်း မှေးမှိန် ပျောက်ကွယ်သွားတတ်သည်မှာ သိသာထင်ရှားသည်။
စကော့လူမျိုး လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်း မကောလီ သည် သေခြင်းတရား အကြောင်းကို မိခင် နော်မာကို တခါမှ မပြောဖူးပါ။ သို့သော် လူတဦးသည် သေဆုံးပြီးနောက် တမလွန်ဘဝတွင် ပြန်လည် မွေးဖွားလာမည် ဖြစ်သဖြင့် သေရမှာကို မစိုးရိမ်ရန် လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်းက သူ၏ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းကိုတော့ ပြောပြသည်။
ကင်းမရွန်းက မည်သို့မည်ပုံ နော်မာနှင့် အတူ နေထိုင်ရန် လူဝင်စား အဖြစ် လာရောက်ခဲ့ပုံကို နော်မာက မေးသည့်အခါ ကင်းမရွန်း ယခင်ဘဝ က အောက်သို့ ပြုတ်ကျပြီး နော်မာ၏ ဝမ်းဗိုက်အတွင်းသို့ လူဝင်စား အဖြစ် ရောက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်းက ပြန်ဖြေသည်။ ကင်းမရွန်း၏ ယခင်ဘဝက အမည်ကို မေးသည့်အခါ ယခင်ဘဝက သူ၏ အမည်မှာလည်း ကင်းမရွန်း ပင် ဖြစ်သည်ဟု လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်း မကောလီ က ဆိုသည်။ (လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်း မကောလီ ၏ ယခင်ဘဝက အမည် အပြည့်အစုံမှာ ကင်းမရွန်း ရောဘတ်ဆင် ဖြစ်သည်။)
စကော့လူမျိုး လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်း မကောလီ အကြောင်းကို ယူကေ ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ် ဖြစ်သော Channel5က "ယခင်ဘဝတွင် နေထိုင်ခဲ့ဖူးသည့် ကလေးငယ်" အမည်ဖြင့် မှတ်တမ်းတင် ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူး ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
အတိတ်ဘဝကို မှတ်မိသော ဗြိတိသျှ လူဝင်စား ကလေးငယ် (၁၀) says:
လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်း မကောလီ သုတေသန အဆုံးသတ် မှတ်ချက်
ယခင်ဘဝကို မှတ်မိသည့် ဇာတ်လမ်းများ တရုတ်သမိုင်းမှတ်တမ်းများတွင် ရှိသည်။ ဥပမာ - ဂျင်ရှု (ဂျင် မင်းဆက် စာအုပ်) ၏ စတုတ္ထ အထုပ္ပတ္တိတွင် "နာမည်ကျော် စစ်တပ်ကြီးစိုးရေးဝါဒီ နှင့် စာရေးဆရာ ယန်ဟု သည် သူ၏ ယခင်ဘဝတွင် သူ၏ ယခုဘဝတွင် အိမ်နီးချင်း ဖြစ်သူ မစ္စတာ လီ ၏ သား ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်" ဟု မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
လူဝင်စား ကလေးငယ်များ အကြောင်းကို လေ့လာသည့် သုတေသီများ ရှိသည်။ အထက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ ကလေးနှင့် မိသားစု စိတ်ရောဂါအထူးကု ဆေးရုံအုပ် ဖြစ်သော စိတ်ရောဂါကုသမှု တွဲဘက်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ဂျင်မ် တပ်ကာ သည် ထိုသို့သော လူဝင်စား သုတေသီ တဦး ဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာ ဂျင်မ် တပ်ကာ သည် လူဝင်စား သုတေသန လုပ်ငန်းကို ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်ရှိ မှတ်ဥာဏ် အခြေပြု သိရှိမှု လေ့လာရေး ဌာန (သဘာဝလွန် ဖြစ်ရပ်များကို စုံစမ်းလေ့လာသော မှတ်ဥာဏ်တခုတည်းအပေါ် အခြေခံပြီး မှတ်မိသိရှိမှု လေ့လာရေး ဌာန) ၏ ဌာနမှူး ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အီယန် စတီဗင်ဆင် (ကွယ်လွန်) လက်အောက်တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၀ဝ၂ ခုနှစ်၊ ဒေါက်တာ အီယန် စတီဗင်ဆင် အနားယူသည့်အခါ လူဝင်စား သုတေသန လုပ်ငန်းတရပ်လုံးကို လွှဲပြောင်း တာဝန်ယူပြီး ဆက်လက် လုပ်ဆောင်လာသည့် လူဝင်စား သုတေသီ ဖြစ်သည်။
လူဝင်စား သုတေသီ စိတ်ရောဂါကုသမှု တွဲဘက်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ဂျင်မ် တပ်ကာ သုတေသနပြု လေ့လာခဲ့သည့် လူဝင်စားများ အကြောင်း အင်တာဗျူး မေးမြန်းခန်းကို ၂၀ဝ၉ ခုနှစ်က ညစဉ် ကြည့်ရှုသူ ၁ သန်းကျော် ရှိသည့် အမေရိကန် CNN ရုပ်မြင်သံကြား၏ နာမည်ကျော် အစီအစဉ် ဖြစ်သော Larry King Live အစီအစဉ်တွင် ထုတ်လွှင့်ပြသသွားခဲ့သည်။.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ တွဲဘက်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ဂျင်မ် တပ်ကာ အပြင် အခြား နာမည်ကျော် လူဝင်စား သုတေသီများ ဖြစ်သော စာရေးဆရာမ၊ ကထိက၊ စိတ်ရောဂါကုသသူ မစ္စစ် ကယ်ရာလ် ဘိုးမင်း နှင့် ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ ဇီဝဓာတုပညာရှင် နှင့် စိတ်ရောဂါကုသမှု ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အီယန် စတီဗင်ဆင် (ကွယ်လွန်) အပါအဝင် သုတေသီများ စုဆောင်းထားသော အသေးစိတ်မှတ်တမ်းများ အားလုံးသည် သေဆုံးပြီးနောက် ပြန်လည် မွေးဖွားခြင်း ရှိသည် ဆိုသည့် အချက်ကို သက်သေပြနေသည်။
အတိတ်ဘဝကို မှတ်မိသော ဗြိတိသျှ လူဝင်စား ကလေးငယ် (၁၁) says:
March 21, 2012 at 5:02 AM Reply
လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်းသည် ယခင်ဘဝက စကော့တလန်နိုင်ငံ၊ ဘားရာကျွန်းပေါ်ရှိ ရောဘတ်ဆင် မိသားစု၏ "အဖြူရောင် အိမ်" တွင် မစ္စတာ ရှိန်း ရောဘတ်ဆင် ၏ သား ကင်းမရွန်း ရောဘတ်ဆင် အဖြစ် နေထိုင်ခဲ့ပြီး ယခုဘဝတွင် စကော့တလန်နိုင်ငံ၊ ဂလပ်စဂိုမြို့တွင် မစ္စတာ မကောလီ နှင့် နော်မာ တို့၏ သား ကင်းမရွန်း မကောလီ အဖြစ် နေထိုင်ခဲ့သည်။ စကော့လူမျိုး လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်း မကောလီ ၏ ဘဝဇာတ်ကြောင်းက ကျွန်ုပ်တို့ကို အောက်ပါအတိုင်း ပြောပြနေသည်။
"ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘဝများသည် စင်စစ်အားဖြင့် သေဆုံးပြီးနောက် မပြီးဆုံးသွားဘဲ ရှေ့ဆက်ပြီး ဘဝ အသစ်များ အဖြစ် တဆက်တစပ်တည်း ဆက်လက် တည်ရှိသွားသည်" ဆိုသည့်အချက်ကို ကင်းမရွန်း၏ ဘဝ နှစ်ဘဝက ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြောပြနေသည်။ အသက်ရှင် နေထိုင်ခြင်း နှင့် သေဆုံးခြင်း သည် တည်ရှိခြင်း ပုံစံတခုသာ ဖြစ်သည်။ သေဆုံးပြီးနောက် ပြန်လည် မွေးဖွားလာမည် ဖြစ်သဖြင့် သေခြင်းတရားကို ကြောက်ရန် မလို ဟု ကင်းမရွန်းက သူ့သူငယ်ချင်းကို ပြောသည့်အတိုင်းပင် ဖြစ်သည်။
မကောင်းသည့် အကုသိုလ် အလုပ်များကို ကျူးလွန်ခဲ့သူများ၏ မကောင်းမှု အကုသိုလ်သည် သူတို့ သေဆုံးသည့်အခါ မပျောက်ကွယ်သွားပါ။ လူသားများ အနေဖြင့် ထိုအချက်ကို သတိရပြီး မကောင်းမှု ဒုစရိုက် လုပ်ရပ်များကို မည်သည့်အခါမှ မကျူးလွန်သင့်ပါ။
( "အတိတ်ဘဝကို မှတ်မိသော ဗြိတိသျှ ကလေးငယ်" ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပြီး စကော့လူမျိုး လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်း မကောလီ ၏ ဓာတ်ပုံ ကို ကြည့်နိုင်ပါသည်။
(1) စကော့တလန်နိုင်ငံ၊ ဂလပ်စဂိုမြို့တွင် နေထိုင်သော လူဝင်စားလေး ကင်းမရွန်း မကောလီ နှင့် မိခင် နော်မာ (ဓာတ်ပုံ) နှင့်
(2) ကင်းမရွန်း မကောလီ က ယခင်ဘဝက ကင်းမရွန်း ရောဘတ်ဆင် အဖြစ် နေထိုင်ခဲ့သော စကော့တလန်နိုင်ငံ၊ ဘားရာကျွန်းပေါ်ရှိ ရောဘတ်ဆင် မိသားစု ပိုင် "အဖြူရောင် အိမ်" (ဓာတ်ပုံ)
သိင်္ဂါကျော်ရေ အစ်မကတော့ အခုမှ ဖတ်ဖူးလို့ စိတ်ဝင်စားပြီး ပြန်ဖေါ်ပြလိုက်တယ်။
စကော့လူဝင်စားကလေးအကြောင်း လာတင်တဲ့ စာဖတ်သူကို မကြာသေးခင်နှစ်တွေမှာမှ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ လူဝင်စားအကြောင်းကို တင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပေးထားတဲ့ Link ကိုနှိပ်လိုက်တော့ တရုတ်စာတွေနဲ့ ရေးထားတဲ့ နေရာမှာ ကလေးနဲ့သူ့အမေပုံကိုပဲ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီမှာမှတ်ချက်အဖြစ် လာထည့်ထားတဲ့ စာသားတွေက မြန်မာလိုနဲ့ ရေးပြီးသား တနေရာက ကူးလာတာ ဖြစ်နိုင်လို့ အဲဒီကူးလာတဲ့ မြန်မာစာသားတွေကို တင်ထားတဲ့ Link ရှိတဲ့နေရာကိုလည်း ညွန်းပေးစေချင်တယ်။